Shaaha Akhtarka Ah Oo La Ogaadey Inuu Culayska Jidhka Lumiyo ,Sidoo Kalena Kordhiyo Shaqada Maskaxda
Daraasad cusub oo ay dhowaan sameeyeen khubarro dhanka caafimaadka ah iyo saynisyahano la socday ayaa lagu ogaadey in Shaaha akhtarka ahi uu lumiyo culayska jidhka, sidoo kalena uu kor u qaado shaqada maskaxda.
Khubaraddan oo intii ay daraasadda ku jireen tijaabo ku sameeyey jiir nooca wax lagu tijaabiyo ah ayaa sheegay in jiirkaasi oo ay siiyeen shaaha akhtarka ah uu bilo yar guddohood noqday mid jidhkiisu intii hore ka fudud yahay ama ka dhuuban yahay.
Cilmibaadheyaashan oo u dhashay wadanka Chine , kana socday maxad Chine laga lee yahay oo ku yaala magaalada Yangling ayaa intaasi ku daray in Jiirkaasi ay sidoo kale hore u tijaabiyeen maskaxdiisa, iyaga oo markii dambena eegay ayna ku arkeen farqi weyn oo u dhexeeya labada jeer.
Waxay cilmibaadheyaashani sheegeen in maadada loo yaqaano EGCG oo ah maado ku jirta shaaha akhtarka ahi ay tahay ta u sababta ah in uu jiirkaasi hoos u dhaco culays ahaan, madaama oo maadadaasi yarayso duxda ku jirta jidhka .
Qormadan oo ay khubaraddani ku daabaceen wargeyska Beijing Times oo uu kazoo xigtay wargeyska Dawan ayaa lagu sheegay in shaaha akhtarka ahi yahay shayga ugu badan ee laga isticmaalo caalamka, ayna hadda ogaadeen inuu yahay waxa ugu sahlan ee lagu ridi karo baruurta jidhka fuusha.
“Waa wax aad loo aqbali karo in la isticmaalo shaaha akhtarka ah marka la doonaayo in culayska jidhka layska rido halkii dawooyin laga isticmaali lahaa”, sidaa waxa yidhi Dr Xube Liu oo ah masuulka kooxdan cilmibaadheyaasha ah.